Monday October 21, 2019 - 09:38:51 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Kadib iska hor'imaad kooban oo ka dhacay deegaan katirsan gobolka Jubbada Hoose ayay xoogaga Shabaabul Mujaahidiin ugu suurtagashay in ay la wareegaan saldhig melleteri.
Wararka ka imaanaya degmaa Dhoobleey ayaa sheegaya in ciidamada Al Shabaab ay dagaal kooban kula wareegeen gacan ku heynta deegaanka Bed-alamo oo kaabiga ku haya xuduud beenaadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya.
Wariye ku sugan Jubbooyinka ayaa SomaliMeMo khadka taleefanka ugu sheegay in ciidamada XSHM ay iska hor'imaad kooban lagaleen maleeshiyaadka katirsan maamulka Axmed Madoobe oo ku sugnaa deegaanka deg-allamo
Xoogaga weerarka qaaday ayaa si buuxda umaamulaya deegaanka kadib markii ay isaga firxadeen maleeshiyaadkii maamulka 'Jubbaland', dadka deegaanka ayaa sheegay in xoogaga Al Shabaab ay gudaha ugaleen saldhiggii ay faarujiyeen maleeshiyaadka Jubbalan waxayna halkaas ka qaateen saanado hub ah.
Wararka ayaa intaas ku daraya in xoogaga Jihaadiga ah ay baaritaano ku sameeyeen guryo ay deegaanka Bed-alamo ka deganaayeen saraakiil ciidan, lamasoo sheegin wax dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhashay dagaalka.
Al Shabaab ayaa bilihii lasoo dhaafay awoodeeda ku fidinaysay inta badan deegaannada kaabiga ku haya xuduud beenaadka Kenya waxaana muuqata in ay sii daciifayaan maleeshiyaadkii dabadhilifyada u ahaa Melleteriga Kenya ee duullaanka ku jooga Jubbada Hoose iyo Gedo.